China PC Crusher ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Jiarui
PC စီးရီးပလပ်စတစ်ကြိတ်ခွဲစက်သည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပအဆင့်မြင့်နည်းပညာများကိုစုပ်ယူသည်။ ၎င်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲစမ်းသပ်မှုရှိပြီးတိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်။
၁။ တင်သွင်းထားသောအထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သောသံမဏိကိုဖြတ်တောက်သောကိရိယာကိုသန့်စင်ရန်အသုံးပြုသည်။ tool ၏ရှင်းလင်းရေးချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်, ထို tool ကိုအကြိမ်ကြိမ်ထက်မြက်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံနိုင်ပါတယ်။
4. မော်တာနှင့်အော်ပရေတာများ၏လုံခြုံရေးကိုနှစ်ဆကာကွယ်ရန် overload protection နှင့် power interlock protection device တပ်ဆင်ထားသည်။
၅။ နို့တိုက်ကျွေးသော Hopper သည်ကြိတ်ခွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းရှိပစ္စည်းများ၏ယိုစိမ့်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်သံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
၆။ သီးခြားဒီဇိုင်း၊ Hopper၊ အဓိကကိုယ်ထည်၊ ဆန်ခါ filter အခြေခံသည်ဖယ်ရှားရန်နှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
8. လှေကားအမျိုးအစားရွေ့လျားဓါးဒီဇိုင်း, ချိုးအင်အားအလွန်ပြင်းထန်သည်။
ဓါး၊ ဖြတ်စက်၊ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများကဲ့သို့သောပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များနှင့် sprues များကိုကြိတ်ခွဲရန်သင့်လျော်သောဓါးပြားနှင့်ဓါးပြားများအကြားရှိဓါးဖြတ်စက်၏ဖွဲ့စည်းပုံ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ; ဓားပုံသဏ္ာန်သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးထုတ်ကုန် granules ယူနီဖောင်းဖြစ်သည်။ ရှုးထိုင်ခုံသည်အပူရှုံ့။ အပြင်ပန်းဒီဇိုင်းသည်လှပပြီးရက်ရောသည်။
၎င်းသည်ပလတ်စတစ်အမျိုးမျိုးကိုချေမှုန်းရန်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ခဲယဉ်းသည့်ပလတ်စတစ်မျိုးစုံ (ဥပမာခေါင်း၊ ဖိနပ်နောက်ဆုံးအစရှိသဖြင့်)၊ ကိရိယာအနားယူမှု၏အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်း၊ လက်သည်းပြန့်ကျဲစေနိုင်သောလက်နက် ဓားတစ်ချောင်းစီ၏ညှပ်အားကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ၎င်းသည်အထူရှိသောပစ္စည်းများ၊ ခဲယဉ်းသောပစ္စည်းများ၊ ပစ္စည်းခေါင်းများစသည်တို့ကိုကြိတ်ခွဲရန်သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည်ဖြတ်တောက်သောကိရိယာများ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းအားကိုထိရောက်စွာတိုးတက်စေပြီး tool wear ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုလုံခြုံမှုဒီဇိုင်းပါ ၀ င်ပြီး box body သည် Double insulation ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြင့်အသံကာကွယ်မှုပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ၎င်းပစ္စည်းများသည်လုံခြုံမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊
၎င်းသည်သေတ္တာ၊ ပါးလွှာသောပိုက်၊ မှုတ်ထုတ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ပုလင်းများ၊ အခွံများ၊ Flat cutter series crusher သည်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီးပြောင်းလွယ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောပြားချပ်ချပ်ဖွဲ့စည်းပုံသည်ပါးလွှာသောနံရံများနှင့်ပါးလွှာသောပစ္စည်းထုတ်ကုန်များကိုကြိတ်ခွဲရန်သင့်လျော်ပြီးကြိတ်ခွဲခြင်းထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုလုံခြုံမှုဒီဇိုင်း၊ နှစ်လွှာပါသောသေတ္တာဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အသံကာကွယ်မှုပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်စုံသည်၊ ၎င်းသည်ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံခြုံမှုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေသောပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ ပါဝါချွေတာခြင်းနှင့်တာရှည်ခံခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခု: PC ကို Heavy-Duty Crusher
PVC Braided ရေပိုက် Extrusion လိုင်း